Ammaanka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / Ammaanka
Hey'adda gaadiidka waa Hey'adda dowladeed ee ka mas'ul ah ammaanka gaadiidka. Hadafka ee hey'adaha Iswiidhan lee yihiin waxa uu yahay in uu san qof ku dhiman ama ku dhaawacmin gaadiidka. Waxaa arintaas qeeyb muhiim ka ah in qofa gaariga wado ku sucdo xawaaro saxsan, uu san sakhraansaneeyn iyo dhamaan in la wada isticmaalo qalabyada difaaca. Waa sharci in dhammaan dadka baabuur socda ku dhexjira ay xirtaan suunka baabuurka. Caruurta waxay u baahan yihiin difaac gaar ah oo ay ka mid yihiin kursiga carruurta. Waxaa kaloo sharci ah in dhammaan caruurta da'doodu ka yar tahay 15 sano ay qaataan koofiyadda madaxa mar walba oo ay baskiil wataan.